Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ahoana no ataon'i Sierra Leone amin'ny làlana haingana mankany amin'ny fizahantany Safer any Afrika
Fantatra amin'ny Hawaii vaovao any Afrika Andrefana, Sierra Leone dia mpikambana mpanorina ny Birao fizahantany afrikanina Ity Firenena Afrikana Andrefana ity dia eo amin'ny làlana haingana ho lasa mpitarika afrikana amin'ny fiarovana sy fiarovana ny fizahantany.
Avy hatrany taorian'ny fanombohana malefaka ny Birao Afrikana momba ny fizahantany nandritra ny WTM tany London tamin'ny taona 2018, Hon Dr. Memunatu Pratt, Minisitra of Tourism & Kolontsaina Sierra Leone dia nampahafantarina tamin'ny Dr. Peter Tarlow, lohan'ny SaferTourism inona no ampahan'ny TravelNewsGroup (mpanonta eTurboNews).
Talohan'ny nanombohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) tamin'ny volana aprily 2019, dia nisy ny hetsika voalohany natao ho tetikasan'ny IFiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka fizahan-tany (ICTP) Ny mpikambana mpanorina Sierra Leone dia nandray anjara tamin'ity fizotrany ity ary ny minisitra Pratt tamin'ny taona 2018 dia efa nanangona ny sisa tavela amin'i Afrika mba hijoro ao ambadiky ny fandraisana andraikitry ny Birao Fizahan-tany any Afrika amin'ny alàlan'ny ICTP. Ny fizahantany dia heverina ho lakilen'ny fampandrosoana ekonomika vaovao ho an'ny firenena.
Tamin'ny volana martsa 2019 dia notendren'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany i Dr. Peter Tarlow ho manam-pahaizana momba ny fiarovana sy fiarovana. Niresaka tamin'ny fandefasana ATB tao Capetown izy tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity ary nanomboka ny mekanisma valinteny haingana ho an'i Afrika, nanampy an'i Oganda nandritra ny krizy roa tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Herintaona mahery ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Sierra Leons, Andriamatoa Nathaniel Tarlow, izay zanakalahin'i Dr. Peter Tarlow ary solontena ara-dalàna ny Safer Tourism tonga tao Sierra Leone ny zoma lasa teo tamin'ny fitsidihana ny fiaraha-miasa eo amin'i Sierra Leone, SaferTourism (TravelNewsGroup) ary ny Birao Afrikana momba ny fizahantany. Izy dia nisolo tena an'i Dr. Tarlow sy Juergen Steinmetz, izay filoha mpanorina ny Birao Afrikana fizahan-tany sy CEO an'ny TravelNewsGroup.
Ny ekipa dia nanolo-kevitra ny hamorona fihaonana an-tampon'ny Executive Le Sierra Leone izay mamela azy hampitombo ny fiarovana ny fizahantany ary handray tombony amin'ity fiakarana ity tsy amin'ny resaka fiarovana ihany fa amin'ny tombom-barotra amin'ny fizahantany koa.
Raha ny fampitam-baovao natao tany Sierra Leone dia sambany tonga tany Sierra Leone ilay vahiny ambony laza
Tarlow jun. nihaona sy nanao fitsidihana ara-pomba fanajana an'ireo Lehiben'ny Mpanatanteraka an'ny MDA andalana toy ny Sekretera ny Filoham-pirenena manan-kaja amin'ny raharaham-bahiny, Minisitry ny fizahan-tany sy ny kolontsaina ary ny Minisitra lefitra misahana ny tanora ny alatsinainy 16 desambra 2019 ao amin'ny tsirairay avy. birao. Atoa Tarlow dia faly tamin'ny fandraisam-bahiny an'i Sierra Leone ary ny Governemanta izany.
Tao anatin'ireny fivoriana ireny dia niresaka momba ireto Tanjona manaraka ireto izy ireo:
1. Mamolavola drafitra mpiantoka fizahantany any Sierra Leone amin'ny ankapobeny. Mamokatra paikady fiarovana ny fizahantany na amin'ny faritra na amin'ny firenena
2. Mamolavola drafitra hetsika fiarovana feno fizahan-tany ampiharina amin'ny sehatra nasionaly sy isam-paritra
3. Ataovy fitaovana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena ny antoka fizahantany;
4. Ampiasao ny fiarovana ny fizahantany ho maodely ho an'ny fiarovana sivily (eo an-toerana).
5. Mamolavola fomba fampiroboroboana tsara sy fifandraisana amin'ny olona any Sierra Leone
Lohahevitra sy fampidirana
Ny fizahan-tany dia iray amin'ireo indostria mitarika an'izao tontolo izao ary fitaovana fampandrosoana lehibe toekarena, ary noho izany, ny fiarovana (heloka bevava sy ny asa fampihorohoroana) dia misy akony lehibe amin'ny fizahan-tany, fitsangantsanganana an-tsambo ary toekarena miompana amin'ny hetsika. Ny firenena sasany toa an'i Kenya sy Afrika atsimo dia mandroso indostrialy fizahantany. Raha nahavita nanatsara ny singa fiarovana sy ny lazany fiarovana ireo firenena ireo dia nanjary mpilalao lehibe tamin'ny fizahan-tany manerantany izy ireo.
Ny firenena hafa, toa an'i Angola, dia manana indostrian'ny fizahan-tany tsy dia mandroso firy, saingy mampiseho fahafaha-manao ambony amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Ankoatr'izay, ny fizahantany dia manome fanatsarana lehibe amin'ny kalitaon'ny fiainana ary mitaky ny natiora
fiarovana sy fanatsarana tarehy.
Rehefa mahatsapa fizahan-tany ny mpiasam-panjakana dia mazàna mandefitra kokoa amin'ny filan'ny mponina maro karazana izy ireo ary manolotra serivisy tsara kokoa ho an'ny besinimaro.
Ny mpizahatany, toy ny olom-pirenena manerantany, dia mitaky fiarovana sy fiarovana amin'ny alàlan'ny matihanina voaofana tsara. Noho io antony io no asan'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny mandray andraikitra hiarovana ny vahininy. Tsy misy filaminana tsara vahiny
matetika ny orinasa dia mampiasa vola faran'izay kely azo atao, ary ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny olom-pirenena dia tsy dia ilaina loatra.
Ny fiantohana fizahan-tany (fiarovana + fiarovana) dia misy fiofanana, fanabeazana, fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko ary ny fahatakarana fa ny filaminana / antoka dia tsy fifehezana tsotra. Ireo mpiasan'ny fizahantany dia mila fanofanana tsy tapaka ary tsy maintsy mahay mandanjalanja mba hanitsiana ny fomba fanaony amin'ny tontolo miova tsy tapaka. Ny iray amin'ireo tolo-kevitra homarihina dia ny hoe rehefa mitombo ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia mitombo koa ny fiarovana ny fizahan-tany. Ny filaminana miampy ny serivisy sy ny sandan'ny vola no ho fototry ny fahombiazan'ny fizahan-tany tamin'ny taonjato faha-21!
Andriamatoa Minisitra Pratt, Sierra Leone & Nathaniel Tarlow
Ny tanjona ho an'i Sierra Leone dia
1. Mamorona ny drafitra momba ny drafitra antoka nasionaly sy isam-paritra, ao anatin'izany ny olana ara-pahasalamana, fiarovana ary fampandrosoana ara-toekarena
2. Mamokatra paikady sy tombana amin'ny fiarovana ny fizahantany;
3. Mamolavola drafitra hetsika fiarovana feno fizahan-tany hampiasaina isam-paritra sy ho an'ny firenena na tanàna tsirairay;
Ny fiadian-kevitra dia ny fanofanana polisy hataony
• Hahafantatra sy hiatrika olana ara-piarovana sy fiarovana an-tany momba ny fizahan-tany
• Manomana polisy ho mpanentana ny fizahan-tany ho an'ny fizahantany ao an-tanàna, na ao an-tanàna na (raha ilaina izany) amin'ny fivoriambe manerantany
• Manampy ny olona eo amin'ny fampiharana ny lalàna hiatrika olana goavana manoloana ny fiarovana ny fizahantany amin'ny tontolo feno heloka bevava sy asa fampihorohoroana
• Mba hanomezana fahatakarana mazava ny fifandraisana misy eo amin'ireo faritra mifantoka amin'ny mpitsidika sy ny asa fampihorohoroana ary ny fomba fampiroboroboana ny drafitry ny fampihorohoroana amin'ireo faritra voafaritra manokana amin'ny tranokala.
• Afaka manova ny paikadim-panazavana amin'ny tontolo politika milamina hatrany.
• Mahafantatra olana ary mamorona valiny manokana hampihenana ny asan-dahalo ataon'ny mpizahatany.
• Mamorona / manamafy ao an-tsain'ny mpampihatra lalàna ny anjara asany amin'ny maha-solontenan'ny governemanta sy ny olona ao amin'ny faritra fizahan-tany.
Miaraka amin'ireo fivoarana ireo, Andriamatoa Tarlow sy Andriamatoa Kallon dia mitsangatsangana amin'ny fizahantany azo tanterahina any amin'ny fizahan-tany sy fiarovana an'i Sierra Leone.
14 ny Desambra 2019
Tacugama, toerana manan-tantara ary hetsika fizahan-tany hafa ao amin'ilay faritra ary mandritra ny alina ao amin'ny Ego Lodge
16 hatramin'ny 20 Desambra 2019 Fitsidihana ivelany any amin'ny Nosy banana Dalton eo an-toerana mahita, mitsoraka scuba, manjono ary hetsika fizahan-tany hafa ao amin'ny Nosy
21st -22 Desambra 2019 Fitsidihana ny fototry ny tantara sy ny vakoka, tsidiho ny Nosy Bunce ary mankeny amin'ny Nosy Tasso hisakafoanana atoandro
23rd-25th Dec 2019 Ny dia fitsangatsanganana an-tendrombohitra Bintumani. Fiakarana an-tendrombohitra, fitsangantsangana ary hetsika fizahan-tany hafa ao amin'ilay faritra
Ny fahitana ny tranokala, ny lakana, ny renirano Moa, ny renirano moa, ny fitsangatsanganana ala, ary ny hetsika fizahan-tany hafa ao amin'io faritra io, ny fatoriana an-day dia mitondra repellants, kapaoty, lamba famaohana, fanilo.
Ecolodge 30 Desambra
31 Desambra 2019
Amin'ity asa vita ity dia hiverina any Etazonia Andriamatoa Tarlow amin'ny 1 Janoary 2019 mba hanome tatitra feno momba ny fanadihadiana satria io no hanoritra ny fampiharana an'io tetikasa io eo amin'ny International Coalition of Tourism Partners, the African Tourism Board, Safer Tourism, Juninnho Investments Company Ltd sy ny governemanta Sierra Leone.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny SaferTourism: www.fioritsourism.com
Fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny International Coalition of Tourism mpiara-miasa: www.ictp.travel
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Juninnjo Investment Company: https://jicltd.business.site/